ဆူးကြားကဗူးခါး | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ဆူးကြားကဗူးခါး
Posted by padonmar on Aug 24, 2012 in Creative Writing, Critic, Photography | 39 comments
ဒီနေ့မနက် ၉နာရီခွဲ ကျမ အလုပ်အသွားလမ်းမှာ ကား accident တစ်ခုကြုံရပါတယ်။
Car accident ကတော့ ခုတလော နေ့စဉ် ဖြစ်နေတာ ဆိုတော့ မဆန်းပါဘူး။
ဒါပေမယ့် မျက်စိရှေ့မှာတင် ဖြစ်သွားတာဆိုတော့ ဖြစ်ပြီးသား ဓာတ်ပုံတွေ တွေ့ရတာနဲ့ မတူပဲ ဖြစ်စဉ်တစ်ခုလုံးမြင်လိုက်ရလို့ အတွေးတွေ တော်တော်ရှုပ်သွားရပါတယ်။
မီးဝါဖြတ်တဲ့ ကက အဖြူ
ပိန်သွားတဲ့ ကားနက်လေးရဲ့တံခါး၊အကျီပြာကပိုင်ရှင်၊(စိတ်ညစ်ရတဲ့ထဲ ကိုဘဲဥက သူ့လိုင်စင်တောင်းတာခံလိုက်ရသေး) ဦးထုပ်နီက ကက ဒရိုင်ဘာ
ပြည်လမ်းနဲ့ ပါရမီလမ်းဆုံ ကို လူတိုင်းသိကြပါတယ်။
ပြည်လမ်းကနေ ပါရမီလမ်း RC2 ဖက်ကို ကွေ့လိုင်း(၁၅ စက္ကန့်ပေးပါတယ်)ပေးတဲ့အချိန် မှာ ပုံထဲက ဆလွန်းကားအနက်လေးက သူ့ယာဉ်ကြောအတိုင်းမောင်းထွက်ပါတယ်။
ချော်တွင်းကုန်းဖက် ပါရမီလမ်းကနေ ပြည်လမ်းမြို့လယ်ဖက်ကို မီးဝါပေးထားချိန် မှာ ကက အဖြူရောင်က မီးဝါကို အမီဖြတ်ဖို့ အရှိန်နဲ့မောင်းလာပါတယ်။
အဲဒီ မီးဝါဖြတ်တဲ့ ကကအဖြူက ကွေ့လိုင်းက ဆလွန်းကားအနက်လေးကို ဒိန်းကနဲ အရှိန်နဲ့တိုက်လိုက်တာ ကားသစ်လေး ရှေံတံခါး ပိန်ချိုင့်သွားတာပါပဲ။
ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ မီးပွိုင့်စနစ်တွေက အမျိုးမျိုးပါ။မီးဝါမှာ ကွေ့ရတဲ့ ပွိုင့်ရှိသလို ကွေ့လိုင်းသီးသန့်ပေးတဲ့ မီးပွိုင့်လည်းရှိလို့ မီးဝါဆိုရင် အားလုံးက ကွေ့လို့ရတယ်လို့ နားလည်ကြပါတယ်။
မီးဝါကိုများရှေ့ဆုံးကားက မထွက်ရဲရင် နောက်ကားတွေက တပွမ်ပွမ်နဲ့ ဆဲကြပါသေးတယ်။
ဖြစ်ချင်တော့ သူတို့ ၂စီး တစ်စီးနဲ့ တစ်စီးမမြင်နိုင်အောင် ပြည်လမ်းအတိုင်းတည့်သွားမယ့် စည်ပင်ရဲ့ ရေဘောက်ဆာလား မိလ္လာဘောက်ဆာလား(သေချာမမှတ်မိလိုက်တာပါ)
က ဘယ်ဖက်ဆုံးယာဉ်ကြော(ကွေ့လို့လည်းရ ၊တည့်လည်းပေးထား)ရဲ့ထိပ်က နေရာယူထားပါတယ်။
အတိုက်ခံရတဲ့ ကားနက်လေးက စည်ပင်ဘောက်ဆာရဲ့ နောက်က ပန်းတက်ပြီးကွေ့ရတာဆိုတော့ ဟိုဖက်က ကကကိုမမြင်နိုင်၊ ကကအဖြူကလည်း ဒီကားနက်လေးကိုမတွေ့ရ၊
အမှားကတော့ ကက အဖြူရဲ့အမှားလို့ပြောရပါမယ်။
ဒါပေမယ့် ဒီကက ဒရိုင်ဘာလျော်နိုင်ပါ့မလား(ပုံထဲက ဦးထုပ်အနီ)
(ကိုထူးဆန်းပို့စ်ထဲမှာ မမ မန့်သလို မိသားစုကလည်းရှာကျွေးရပါတယ် ငြီးပြအုံးမယ်)
အနစ်နာဆုံးကတော့ လမ်းမှန်သွားပါရက် အတိုက်ခံရတဲ့ ဆလွန်းကားအနက်လေးပါပဲ။
ကွေ့လိုင်းမှာ ခပ်တည်တည်နဲ့ တည့်တည့်သွားမယ့် စည်ပင်ဘောက်ဆာကြီးကတော့ သူနဲ့မဆိုင်သလို ခရီးဆက်လို့သွားပါတယ်။
ကဲ “စနစ်ကြောင့်မဟုတ်စနစ်ကြောင့်မဟုတ်“ အနိစ္စ
ဒီလမ်းပေါ်က ကိစ္စတွေကို လွှတ်တော်ထဲ ဆွေးနွေးပြီးမှ ပြုပြင်ရလောက်အောင်တော့ မခက်ခဲဘူးထင်ပါရဲ့။
ခုလောလောဆယ်တော့ လမ်းပေါ်မှာ အပေါ်က ခေါင်းစဉ်အတိုင်း။
နှစ်ဘက်လုံး အကုသိုလ်ဝင်တာပါပဲ ဆရာမ ရေ ! လူတွေ ထိခိုက်ဒဏ်ရာမရတာပဲ တော်သေးတယ်လို့ ဆိုရတော့မှာပါပဲ —
မျက်စိရှေ့မှာ ယာဉ်တိုက်မှုဖြစ်တာ အဲ့လောက်ပဲ ထိလို့တော်သေးတာပေါ့ ဒေါ်ဒေါ်။ ကျမတုန်းက ဘေးနားက ဖြတ်သွားတဲ့ ဆီ ဘောက်ဆာကားက စက်ဘီးနင်းလာတဲ့ အမျိုးသမီးကို (အရှိန်ဟပ်လိုက်တော့ ရုတ်တရက်လဲပြီး ကားဘီးအောက် ရောက်ပြီး) ခေါင်းပြားသွားအောင် တက်ကြိတ်မိပါတယ်။
ဒီလိုကြိတ်မိတာတောင် ကားက မသိပဲ အေးအေးလူလူ မောင်းထွက်သွားလို့ လိုက်ခေါ်ရပါတယ်။
ဘေးနားက ဖြတ်သွားတဲ့ ကျမဆိုတာ ခေါင်းပြားတယ်လို့ အသံကြားတာနဲ့ (အကူညီပေးဖို့ဝေးလို့) အဲ့ဖက်ကို လုံးဝမလှည့်တော့ပဲ နေခဲ့တာပါ။ ကြောက်လွန်းလို့ တကိုယ်လုံးကို တုန်လို့ ကိုယ့်လမ်းကိုယ်တောင် ဆက်မသွားနိုင်ပဲ ပြန်လှည့်ခဲ့ရတာပါ။
ယာဉ်စည်းကမ်းလမ်းစည်းကမ်းကို နားမလည်သူတွေ လိုင်စင်ကိုင်ပြီး မောင်းနေသမျှ ကာလပတ်လုံး မုန့်လုံးစက္ကူကပ်သလို ဒီပြသာနာတွေ တက်နေအုန်းမှာပါ။ ဒီလိုအမှုတွေကတော့ လူကြောင့်ပါ ဒေါ်ဒေါ် လူကြောင့်ပါ။
မန်းတလေးကလူတွေ ရန်ကုန်ရောက်ရင် ကားမမောင်းရဲကြတာ ဒါမျိုးတွေကြောင့်ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ် ။ချာတိတ်တွေကတော့ ချွင်းချက်ပေါ့
ရန်ကုန် ကလူ လဲ မန်းလေး ရောက်ရင် .. ကားမမောင်း ရဲပါဘူးဗျာ … အဲဒါလေး .. :-)
မှန်၏.. ဆိုင်ကယ်နဲ့ စက်ဘီးစီးကြောင်းထဲအလိုက်သင့်မျောပါဖို့ လွယ်တယ်မှတ်လို့
ဟုတ်တယ် မန်းလေးမှာလဲ အထာမသိရင် မောင်းရခက်တယ်
ရန်ကုန်သားတွေက သံရုံးကားစတိုင်နဲ့  လီဗာနင်းတာလျော့ တယ်
ဒီလို အကုသိုလ်ဝင်တဲ့သူတွေ တော်တော်များနေပြီ။
လူတွေ စည်းမဲ့ကြတာများပေမယ့် အဲဒီစည်းကမ်းမဲ့ကြမယ့် အရေးကို ကြိုတင် မြော်မြင်နိုင်တဲ့ အရည်အချင်းရှိရင် accident (ယာဉ်မတော်တဆမှု အဓိပ္ပါယ်ထက်မက)တွေလျော့ပါးအောင် လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
(ဥပမာ …ဘိုးဘွားရိပ်သာက အိမ်သာတွေမှာ လက်ကိုင်တန်းလေးဘေးမှာထားထားရတယ်၊အားယူထနိုင်ဖို့၊လှေခါးထစ်တွေ တတ်နိုင်သလောက်ရှောင်ပေးရတယ်။အ်ိမ်သာတံခါးတွေ lock မလုပ်ခိုင်းဘူး။စသည်စသည် ကြိုတင်ကာကွယ်ထားတာမျိုးပေါ့)
အခုကိစ္စမှာလည်း သေချာစဉ်းစားရင် ဘယ်သူမှမမှားဖြစ်နေတယ်။တရားခံကတော့……..
တော်တို့ မန်းလေးက သာဆိုးအုံးမယ်။လမ်းပြောင်းပြန်မောင်းကြတာတွေ တော်တို့ပဲရေးရေးနေပြီးတော့။
ကယ်လီဖိုးနီးယားက.. ကားအာမခံမရှိရင်.. ကားမောင်းခွင့်မရှိကြောင်း.. ဥပဒေနဲ့ကိုပြဌာန်းထားကြောင်း..
California’s Vehicle Financial Responsibility and Suspension Laws
In 2006, the law changed the way the Department of Motor Vehicles verifies insurance for privately owned vehicles.
Changes were made to ensure that vehicles driven on California roads have liability insurance that provides financial responsibility for any damage or injury caused byatraffic collision regardless of fault, and to remove uninsured vehicles from the highways.
Insurance companies in California are required by law (California Vehicle Code [CVC] §16058) to electronically report private-use vehicle insurance information to DMV. Insurance companies are exempt from electronically reporting insurance information for vehicles covered by commercial or business insurance policies.
မီးပွိုင့်ကားတိုက်တာ.. အဲလောက်လေးပိန်တယ်ဆိုပြီး.. အံ့သြနေတာ..
ဒီမှာက..အရှိန်ပြင်းတေ့ာ.. အဲလိုမီးပွိုင့်အ၀ါမှာသာ ချလိုက်ရင်.. ခေါင်းကြေတဲ့.. တိုတယ်လော့စ်တွေများတယ်…
ကျုပ်လည်း..မီးပွိုင့်အ၀ါ.. ဖြတ်တိုက်ခံရပြီး.. တိုတယ်လော့စ်ဖြစ်ဖူးရဲ့.. ဆေးရုံ ရောက်ဖူးရဲ့…
ကိုယ်တိုင်မောင်းတာတော့ မဟုတ်.. ဘေးကလိုက်လာတာပါ..
ကိုယ်ဖက်က. တနာရီ ၃၀လောက်.. သူ့ဖက်က..တနာရီ ၆၀mphလောက်ပေါ့…
တော်သေးတာပေါ့ အန်တီ့ ကားသစ်ကြီး နဲ့ မငြိတာ ..
သူကြီးရေ ..ကံကောင်းတာက ဒီမှာ မြန်မြန် မောင်းလို့ မရအောင် စည်ပင် က လုပ်ပေးထားတယ်လေ..
အခုလို မိုးရာသီဆို ပို ဆိုးသေး … လကမ္ဘာ နဲ့ ထင်မှတ်မှားလောက်အောင် ဖြစ်နေတော့ မြန်မြန်မောင်းလို့ ရဘူးရယ်..(အဲ့ဒီ့ နေရာကတော့ လမ်းချောပါတယ်.. )
မြန်မာပြည်မှာ ကား အာမခံတော့ အားလုံးရှိပါကြောင်း ။ လိုင်စင် သက်တမ်းတိုးရင် မဖြစ်မနေ ထားရပါကြောင်း ..
အဲဒီနေ့က လိုရာ ခရီးရောက်တော့ နောက်ဘီးကြိးပြားနေလို့ ကြည့်လိုက်တာ construction တစ်ခုက လမ်းပေါ်ကျနေတဲ့ ၄ လက်မအရှည်ရှိ မူလီကြီး စိုက်ဝင်သွားလို့ ဘီးပြေးဖာလိုက်ရပါကြောင်း။
ကားမခံကို ပြောတာမှာ.. မြန်မာပြည်က.. ကိုရင်ထူးဆန်းပြောတာနဲ့.. သဘောတရား.. မတူဘူးနဲ့တူတယ်..။ ကျုပ်လည်း မြန်မာပြည်ကအကြောင်း သိပ်မသိပါ..
ကယ်လီဖိုးနီးယားမှာ.. ကားအတွက်လိုင်စင်ကြေး..ဘာညာကြေးတွေက.. သပ်သပ်ပေးရပါတယ်..။
ဥပမာပေါ့..၊ အခုကျုပ်ယူထားတာက.. ပတ်လည်အာမခံ..
ကိုယ်ကတိုက်တိုက်.. သူကတိုက်တိုက်.. အာမခံကစိုက်လျှော်ပေးရမယ့်စနစ်ပေါ့..။
ကိုယ်ကတိုက်လို့.. ကိုယ်မှားရင်လည်း.. အာခခံက.. စိုက်လျှော်ပေးပြီး.. .နောက်နှစ်အာမခံကြေးတက်ချင်တက်လာမပေါ့..
သူကတိုက်လို့.. သူကထွက်ပြေးသွားရင်လည်း.. ကိုယ့်ကုန်ကျစရိတ်တွေ.. အာမခံကလျှော်ပေးတာပါ..
ထွက်မပြေးရင်တော့.. အာမခံက.. လုပ်စရာသူတို့ကပဲလုပ်ပေးပြီး.. သူ့အာမခံကငွေကိုဆွဲချ.. ကိုယ့်နစ်နာတာတွေ လျှော်ပေးပါတယ်..။
ဘယ်သူဖြစ်ဖြစ်.. ဒဏ်ရာအနာတရဖြစ်လို့.. ဆေးရုံတက်ကုလည်း. တက်ကုခစရိပ်ပါ လျှော်တာပါ..
အပေါ်က ကားအာက်စိဒန့်မျိုးဆို.. မှန်တဲ့ကားက.. တဖက်သူရဲ့အာမခံနံပါတ်နဲ့..လိုင်စင်နံပါတ်တောင်းပြီး.. (ကိုယ့်ကားဆက်မောင်းလို့ရရင်) ထွက်သွားယုံပါပဲ.. ကျန်တာ.. အာမခံကဆက်လုပ်ပါတယ်..
မောင်းလို့မရရင်.. ကိုယ်ကလည်း.. တခုခုဖြစ်နေတယ်ထင်ရင်.. ဆေးရုံကားခေါ်လိုက်ယုံပါ..
အိမ်ရောက်ပြီးမှ.. ကျောကအောင့်သလိုလိုထင်လည်း.. ဆေးရုံသွား.. ကုယုံပါ..
ကုန်ကျစရိပ်ကို ခဏစိုက်ထားရပြီး. ဟိုဖက်အာမခံကို လှမ်းတောင်းရင်.. သူတို့လျှော်ပေးပါတယ်..။
အရှိန်ပြင်းပြင်းမမောင်းရပါပဲ တိုက်မိနေကြရတာ နစ်နာတာပေါ့။
ဒီမှာ မောင်းရင် ပုံမှန်ဆို 40Kilo/hr မြန်ရင် 60 Kilo/hr ပဲ/
ကားလိုင်စင်ဝင်ရင် ဆောင်ရတဲ့ ပရီမီယံကလည်း အလုပ်မဖြစ်ပါဘူး။
အဘဖေါတခါပြောတဲ့ ကားတံခါးပိန်သွားရင် အဘမိန်းမ ဆရာဝန်မကြီးက၀မ်းသာတယ်၊အသစ်ရတော့မယ်ဆိုပြီးတော့ ဆိုတာ သတိရပါတယ်။
အဲဒီလိုရဖို့လည်း အာမခံကြေး တန်ဖိုးကြီးကြီး ဆောင်ထားရမှာပဲ။
တကယ်ဆို အဲဒီ မီးပွိုင့်ဒေါင့်မှာ ရဲအိမ်အသေးလေးတောင်ရှိတာ မဟုတ်လား။
အဲဒီထဲ မှာ ဥဥ တွေ ၃၊ ၄ ယောက် အမြဲ ထိုင်နေတာ။
ဂဇက်ရွာသားတွေ လက်ထဲ မှာ သတင်းဓာတ်ပုံတွေ အတော်ရနေပြီ။
ဘရာကြော် က စလို့ ဂေါ်ရခါးသီးကြော် အဆုံး အကြော်စုံပါ ရှင့်။ :-)
ခုကိစ္စက ဥဥ မရှိလို့ဖြစ်တာမဟုတ်၊
မှားနေတဲ့ အချက်ပြစနစ်ကြောင့်လို့ မြင်ပါတယ်။
အဖြူ နဲ့ အမဲ တွေ့ကြရာဝယ်၊ အနေသာလုပ်သွားတာ စည်ပင်ကားကွယ်။
စဉ်းစားတော့ ခေါင်းမှာ ချာချာလည် လို့ ဆက်ဆိုလိုက်မယ်။
အခုလောလောဆယ်ဆယ် အဲလိုကားတွေကိုရှောင်နေရလို့ 
ဒီလိုတွေ အဖြစ်များပါတယ်။ ခုနောက်ပိုင်းက ဒါတောင်ရန်ကုန်မှာ ဆိုက်ကယ်လိုင်စင်နဲ့စီးခွင့်တရားဝင်ပေးလိုက်ရင်တော့ အတော့်ကို မတွေးဝံ့စရာတွေပါဖြစ်လာတော့မယ်။
ကိုဆာမိ ပြန်လာမယ့် စာလည်း ဖတ်ချင်ပါသည်။
ဆိုင်ကယ်ပေးမစီးတဲ့မြို့ တော့ ရန်ကုန်ပဲကြားဖူးပါတယ်။
ဆိုင်ကယ်ကြောင့် accident ဖြစ်တဲ့ ဆိုးကျိုးထက် ဆိုင်ကယ်ကြောင့် ခရီးပိုတွင်တာ၊ကားအစား ဆိုင်ကယ်သုံးရတဲ့အတွက် ကုန်ကျစားရိတ်သက်သာ လျင်မြန်တဲ့ ကောင်းကျိုးတွေ ပိုရှိမှာပါ။
အန်တီရေ ..အခု ၂၅-၈-၁၂ ည ၉:၃၀ က ရန်ကုန် အင်းစီန်လမ်း ..၇န်ကုန် ဘက် အသွားလမ်း လှိုင်ရဲစခန်း မရောက်ခင် တက်စီ တစ်စိး ပက်လက်လန် နေတာ တွေ့ခဲကြောင်းပါ ..
ကား၊ ကားစည်းကမ်းနဲ့ လမ်းပိတ်တဲ့ကိစ္စတော့
အဲဒါကြောင့် ကျုပ်တော့ ရန်ကုန်မှာကားမောင်းရင် တနေ့မဟုတ်တနေ့ သူများတိုက်တာခံရမှာပဲလို့ ကြိုနှလုံးသွင်းထားပြီး အတိုက်ခံနိုင်လောက်တဲ့ကားမျိုးပဲ ရွေးစီးတာ…
ဦးဦးပါ ..ဂတိပေးပြီးကြောင်း ဟု မှတ်ယူလိုက်ပါသည် ။ မျှော်နေပါမည်။
ကားစမောင်းတတ်ကာစကတည်းက ဘယ်အချိန် ဘယ်ကားနဲ့ ၀င်တိုက်မိမလဲဆိုပြီး ကားပေါ်ရောက်တာနဲ့ ဘုရားစာဆိုတာ အကျင့်ဖြစ်နေပြီ။ [O:]
အခု ပဋ္ဌာန်းပဥှာဝါရ ကို ကားပေါ်မှာချည်း ကျက်နေရတာ အလွတ်ရသလောက်ရှိပြီ။
အန်တီရှေ့တင်ဖြစ်တာ … ကံသီပေလို့ ၊အရှိန်လည်း သိပ်မပြင်းလို့ အန်တီကားအသစ်ကြီးဘာမှမဖြစ်တယ် … ။ ကားဖြူက ကြောက်အားလန့်အားနဲ့ ….. ဘယ်သာကွေ့ချမယ်ဆိုလျှင် လမ်းပြောင်းပြန်တက်လာနိုင်တယ် …. ဟူး
အန်တီ ကံကောင်းလိုက်၊ မကောင်းလိုက်ပါပဲ။
ယာဉ်တိုက်မှုဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းအရင်း အများကြိးရှိပါတယ်။
၁။လမ်းကြောင်းစနစ် (ညာမောင်းစနစ်မှာ ညာဖက်မှာရှိတဲ့
စတိရာရင်က ကျော်တက်ဖို့ အတွက် အဆင်မပြေပါဘူး
၂။မိးပွိုင့်ထိမ်းချုပ်မှုစနစ်(အားနည်းတယ်၊မိးပျက်တယ်)
တယ်၊တစ်ချို့လမ်းတွေမှာ ရှာလို့ တောင်မတွေ့ ဘူး၊
တော်အမြန်လမ်းမှာဖြစ်တဲ့အမှုတွေဟာအမြန်နှုန်းကြောင့်ပါ)
ကို သွားမဖြေပဲ အဝေးရောက်ရသူတွေရှိတယ်)
ပညာမတတ်လည်း လုပ်စားလို့ ရတဲ့Taxi မောင်းတယ်၊
တိုင်းသိမှာပါ၊လမ်းကွေ့ အဆင်းအတက်မှာ ဗဟိုခွာအားကို
ထိမ်းပေးတဲ့ slope တွေမရှိဘူး၊ ဗန္မုလတံတား သာကေတ
အဆင်းဘက်ကိုကြည့်ပါ မကြာခဏ မတော်တဆမှုဖြစ်တယ်၊
၆ လမ်းသွား လမ်းမတွေနည်းလွန်းတယ်၊ကွန်တင်နာ သစ်လုံး
ကားတွေ့ အတွက် သိးသန့် လမ်းမရှိဘူး)
ဒါတွေပြင်နိုင်ရင် ယာဉ်တိုက်မှုလျော့သွားမှာပါ)
ဖြေရှင်းဖို့ နည်းလမ်းနဲ့ တာဝန်ယူဖြေရှင်းရမယ့်ဌာန(လမ်းလျှော်သူ၊ကားမောင်းသူ၊စည်ပင်၊မော်တော်ယာဉ်ထိန်းသိမ်းရေး စသည်လေးပါရေးပေးနိုင်ရင် )ပိုကောင်းပါမယ်။
ကားတွေဈေးပေါလာတော့ တန်ဖိုးသိပ်မထားတော့ တာတွေ့ ရတယ်
တိုက်ပြီးရင်ပြေးဖို့ ဘဲစဉ်းစားပြီး ပြေးလို့ လဲရနေတယ်
ဘတ်စ်ကားလောကမှာဒရိုင်ဗာရှားလို့ တွေ့ လေရာဒရိုင်ဘာခန့် ရတယ်
ယဉ်မောင်းတွေရဲ့ အသက်နဲ့ အတွေ့ အကြုံနုတယ်
စည်းကမ်းအပါအဝင် ကျင့် ဝတ် နဲ့ အထာ နားမလည်ဘူး
တစ်ဦးနှင့် တစ်ဦး ငဲ့ ညှာမှုမရှိဘူး
ဘရိတ်နင်းတိုင်းကားရပ်လို့ ရမယ်ထင်ကြတာနဲ့  ကားမောင်းတယ်ဆိုတာ
တစ်ဦးနှင့် တစ်ဦး ငဲ့ညှာ မှုမရှိဘူး .. company ကား များမောင်းလာတာမြင်ရင် .. ခပ်လှမ်းလှမ်း ကနေ လမ်းဖယ် ပေးတဲ့ အကျင့် ရနေတာ တော်တော် ကြာနေခဲ့ပါပြီ … :-(
အဲဒီနေ့က ကံကောင်းပေမယ့် မနေ့ကတော့ ဆူးကြားမှာ ညပ်သွားပါပြီ။
အဲဒီကားကို ကျမအကိုတစ်ယောက်တည်းမောင်းသွားတာ ဘုရင့်နောင်တံတားလှိုင်သာယာဖက် အဆင်းမှာ မျက်နှာချင်းဆိုင်ကလာတဲ့ မန်းမြို့တော်ပေါက်စီကကားက စလစ်ဖြစ်ပြီးဝင်တိုက်တာခံလိုက်ရပါတယ်။
ရှေ့ကိုက် ၂၀၀ လောက်မှာ အဲဒီကားစလစ်ဖြစ်နေတာမြင်လို့ ကျမအကိုက ကားကိုရှေ့ဆက်မသွားပဲရပ်ပြီးနေရင်း နီးလာတော့ နောက်ဆုတ်ရှောင်ဖို့ ဘက်ဂီယာထိုးနောက်ကားရှင်းမရှင်းကြည့်တုံး တည့်တည့်ဝင်တိုးသွားတာပါပဲ။
ပြန်ပြင်ပေးဖို့ကတိတောင်းပြီး သူ့ပိုင်ရှင်ဆီရောက်တော့ ဒီဒရိုင်ဘာ(လိုင်စင်သက် ၂နှစ်ပါ။စလစ်ဖြစ်ရင် ဘယ်လို ထိန်းရမယ်ဆိုတာတောင် မသိတဲ့၊အရှိန်ပြင်းပြင်းမောင်းဖို့ပဲသိတဲ့ ကားသမားပါ။
) ခဏခဏတိုက်လို့ထုတ်ပစ်မလို့စဉ်းစားနေတာ သူ့သာ ဖမ်းထားပါတော့ ၊မလျော်နိုင်ဘူးဖြစ်ပါတယ်။
ဒါနဲ့ ကိုယ့်ဖက်က ညှာတာပြီး အမှုမလုပ်တာ(ကားပေါ်မှာ မုန့်တွေလည်းပါ)ကိုယ့်အမှားမပါတာတွေရှင်းပြပြီး ၊အလျော်တောင်းတာမဟုတ် ပြင်ပေးဖို့ပဲပြောတော့မှ ကိုယ့်စေတနာနားလည်ပြီး ပြင်ပေးပါမယ်တဲ့။
အဲဒီကားပိုင်ရှင်လည်း ပိုက်ဆံကုန်၊ကိုယ်လည်းထိခိုက်(သူပြင်ပေးပေမယ့် ကိုဆာမိပြောသလို အော်ကြောပျက်သွားပြီလေ)၊
(တိုက်ပြီးရင်ပြေးဖို့ ဘဲစဉ်းစားပြီး ပြေးလို့ လဲရနေတယ်
ဘတ်စ်ကားလောကမှာဒရိုင်ဘာရှားလို့ တွေ့ လေရာဒရိုင်ဘာခန့် ရတယ်
စည်းကမ်းအပါအဝင် ကျင့် ဝတ် နဲ့ အထာ နားမလည်ဘူး)
အရင်က လိုင်စင်က စာအုပ်နဲ့ဆိုတော့ ဒရိုင်ဘာလာလျှောက်လို့ လိုင်စင်မှာ အနီမှတ်ချက်တွေတွေ့ရင် မခန့်တော့ဘူးပေါ့။
ခုတော့ ဘာပြစ်မှုရှိမှန်းလည်းမသိရပဲ ကြုံရာလူဆွဲခန့်တာမဖြစ်ရအောင် လိုင်စင်မှာ ပြစ်ဒဏ်မှတ်ချက်ထုပေးနိုင်တဲ့ စနစ်လေးရှိသင့်ပါတယ်။
သို့မဟုတ် ကွန်ပျူတာနဲ့ မှတ်တမ်းတင်ထားတာကို မည်သူမဆို အလွယ်တကူ ၀င်ကြည့်လို့ရမယ့် ၀က်ဆိုက်နဲ့ တင်ထားသင့်ပါတယ်။
ကျမမောင်းနေတဲ့ အခိုက်မဖြစ်တာ ကျမကားမောင်းရင်းကျက်နေတဲ့ ပဋ္ဌာန်းပဥှာဝါရ အာနိသင် ကြောင့်ထင်ပါရဲ့။ကျမသာဆို နားမလည်ပဲ ဆက်မောင်းလို့ အရှိန်ရှိတဲ့ကား၂စင်းတိုက်မိရင် ပိုဆိုးမှာ။
သူကြီးပြောသလို ကားအာမခံစနစ်ရှိမှလည်း လူတွေ ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းမောင်းကြမယ်ထင်ပါတယ်။
ယူအက်စ်မှာတော့.. ကားမောင်းရင်း.. စာကျက်တာ.. စာဖတ်တာ..စသဖြင့်တခြားဟာတွေပေးမလုပ်ဘူး..
သူတို့အကြိမ်ကြိမ် ..လေ့လာဆန်းစစ်ထားတဲ့.. ရလဒ်အရ.. အဲဒါတွေလုပ်ရင်..ကားတိုက်မှုပိုဖြစ်နိုင်သတဲ့..
ကားမောင်းရင်း.. ဖုန်းပြော..တက်စ်လုပ်ရင်.. ဒဏ်ပါချသဗျ..
ကျမ စာကျက်တာ စာအုပ်နဲ့ ကိုင်ကျက်တာမဟုတ်ဘူးသူကြီးရဲ့။
သီချင်းနားထောင်သလို ဖွင့်ထားပြီး လိုက်ဆိုတာ ဆိုတော့ သီချင်းနားထောင်ရင်တော့ ဒဏ်မချလောက်ပါဘူးနော်။
(ပဋ္ဌာန်းပဥှာဝါရလို့ထည့်ပြောတာ ကျမနဲ့ စာတူတူကျက်ဖက် သူငယ်ချင်းဖတ်တဲ့အခါ သိအောင်လို့ပါ)
ကားစလစ်ဖြစ်တာ ကားပိုင်ရှင်မှာလည်း အပြစ်ရှိတယ် အန်တီရေ ။ တာယာတွေ ဘယ်လောက်ပါးပါး ကုန်မှာစိုးပြီးမလဲတဲ့ သူ့ အပြစ် တစိတ်တဒေသ ပါတယ် ။
အန်တီ့ကား အသစ်ကြီး ..နှမြောစရာ..
မြန်မာပြည် မှာ အလုပ်လက်မဲ့တွေ တော့ ပေါပါရဲ့ ။ ဒါပေမဲ့ အလုပ်ရှင်တွေလည်း အလုပ်သမားကောင်း မရှိကြဘူး ။ ယာဉ်မောင်းဆိုလည်း ရှားတာဘဲ ။ ယာဉ်မောင်းလစာ တစ်သိန်းကျော်ကျော် ပေးရပေမဲ့ လူကောင်းရဖို့ မလွယ်ဘူး ..
အဲဒီလို တာယာပါးလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာ ကျမနားမလည်ခဲ့ဘူး။
လမ်းကြောင့်ဖြစ်တယ်ပဲထင်ခဲ့တာ၊ကျမလည်း ခွေကိုင်ရုံပဲတတ်တဲ့ ဒရိုင်ဘာပါပဲ။
ဒီကိစ္စ ကျမ အစပြန်ဆွဲထုတ်တာ အဲဒီ ယာဉ်မောင်းခန့်တဲ့ စနစ်ကိုလည်း ဆွေးနွေးချင်လို့ပါ။
ဟုတ်တယ်၊ယာဉ်မောင်းလစာက တစ်သိန်း ပတ်ဝန်းကျင်ပေးရတယ်။ အရင်တုံးက Eros တောင် ရေးဖူးတယ်။ဘွဲ့ရတဲ့ သူ့လစာက ယာဉ်မောင်းလောက်တောင်မရလို့ စိတ်နာတဲ့အကြောင်းလေ။
အလုပ်ရှင်ဖက်ကရော ဘယ်လိုလူကို ရွေးခန့်ရမှာလဲ။လိုင်စင်သက်တမ်းနဲ့တော့ ပြောမရဘူးဖြစ်နေတယ်။
အခုတော့ လုလင် အပေါ်မှာမန့်ထားသလို company ကားဆိုဝေးဝေးရှောင်နေရပါတယ်။အခုရှောင်တဲ့ကြားက ခံလိုက်ရတာပါ။
ယာဉ်မောင်း ထင်ရာလုပ်သမျှ အလုပ်ရှင်နဲ့ လမ်းပေါ်ကလူတွေခံနေရတာ မဖြစ်သင့်ပေမယ့် အဖြစ်များဆုံးပါပဲ။
ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ရမ်းလို့ဖြစ်တဲ့ ယာဉ်တိုက်မှုရှိပေမယ့် အခစားယာဉ်မောင်းတွေကြောင့်က ပိုအဖြစ်များနေသလိုပါပဲ။
ဝေးဝေးရှောင်ရသည့် ကားများ ။
(၇) အနက်ရောင်စတစ်ကာ ကပ်ထားသော ကားကြီးများ
(၈)အချို့ အမျိုးသမီး များမောင်းသောကား
မြန်မာပြည်မှာယာဉ်တိုက်ရင် ဘာတွေလုပ်ရမယ် ဘယ်ပုဒ်မနဲ့ငြိတယ်ဆိုတာထောင်ဒဏ်ငွေဒဏ် ပြစ်ဒဏ်ဘယ်လောက်အထိရှိတယ် ဆိုတာတွေတော့သိချင်သား။
အချို့အမျိုးသမီးမောင်းသောကား= ကြာသာပတေးနံအစ ၊ စနေနံအလယ် ၊ ကြာသာပတေးနံအဆုံး။